छोराको रहरमा आठ छोरी: श्रीमती भन्छिन् अब पुग्यो, श्रीमान भन्छन् छोरा नै चाहिन्छ ! – Sanjal Nepal
Homeसमाचारछोराको रहरमा आठ छोरी: श्रीमती भन्छिन् अब पुग्यो, श्रीमान भन्छन् छोरा नै चाहिन्छ !
November 18, 2020 admin समाचार 2663
कुमारीका श्रीमान मुकुन्द दर्जी ४८ वर्षका भए । मुकन्द गाँउमै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन् । दिनभरी काम गरेर मुकुन्दले ५ सय ज्याला पाँउछन् । परिवारमा मुकुन्दको कमाई बाहेक अन्य आम्दानीको श्रोत केहि छैन । छोरा जन्माउने आशमा लगातार छोरी जन्मिए ।वर्षेनी जस्तै भएका सन्तानलाई लालन पोषण र शिक्षा दिक्षाको लागी समस्या रहेको कुमारी बताउछिन् । काली माध्यमिक विद्यालयको १० धुर जग्गामा सानो घर बनाएर बसेका दर्जी परिवारले उक्त विद्यालयलाई वार्षिक भाडा वापत ६ सय तिर्ने गरेको मुकुन्दले बताए ।
हास्य कलाकार हरिवंश आचार्यको आज जन्मदिन, बिहानै देखि शुभकामनाको ओईरो
November 26, 2020 admin समाचार 1576
February 6, 2021 admin समाचार 1541
November 3, 2020 admin समाचार 6197